သက်ဝေ: တန်းစီခြင်းနဲ့ နေသားတကျ ဖြစ်နေသူများ
Posted by သက်ဝေ at 5:39 PM
I really hate in waiting. But you know sometime we need to. I feel not comfortable on someone is standing beside the table while I am eating.
ဆုမြတ်မိုး July 16, 2013 at 6:14 PM
တစ်နေရာရာမှာအကြာကြီးရပ်ပြီးစောင့်နေရတာလောက်မုန်းတာမရှိဘူး ။ ဆုမြတ်ကတော့ Q ရှည်ရင်ဝေးဝေးကရှောင်ပါတယ် ။ mac donald က ကစ်တီလည်းမလိုချင်ဘူး ၊ ခေါက်ထီး ၊ တစ်ရှုးဘာမှမလိုချင်ဘူး ။ ခေါက်ထီးတစ်ချောင်းပိုက်ဆံတစ်ဆယ်တောင်မရှိဘူး ။ တစ်ရှုးတစ်ပက်ကင်မှ နှစ်ကျပ်ကျော်ပဲရှိတယ် ။ သူဌေးမဖြစ်လဲနေပါစေတော့ မတန်းစီပါရစေနဲ့..။ food court မှာတန်းစီရမှာပျင်းလို့ cup noodle ကို711 ကိုဝယ်စားမိတယ်..ဒါတောင် ပိုက်ဆံပေးဖို့သုံးမိနစ်လောက်ကျူလိုက်ရသေးတယ် ။ ဟင့်အင်း လုံးဝတန်းမစီချင်ဘူးး) :P
တန်းစီတဲ့အလေ့အကျင့်ကကောင်းပါတယ် ဦးရာလူစနစ်ပေါ့ ရန်ကုန်မှာတုန်းက uniကျောင်းအပ်လို့ ကျောင်းလခသွင်းရင် ဘာမှန်းမသိလူတွေပြုံတိုးနေကြရတယ်
အရင်ဘဲရောက်ရောက် နောက်မှဘဲရောက်ရောက် တိုးနိုင်တဲ့သူအရင်ပြီးတာဘဲ ယောက်ကျားလေးတွေအတွက်အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေကျ တိုးလဲမဟုတ် မတိုးတာ့လဲ ညသန်းခေါင်ရောက်သွားမယ်
စလုံးကလူတွေ တန်းစီပြီးစောင့်နိုင်တဲ့ ဝရိယ ကလက်ဖျားခါလောက်တယ် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကတော့ စောင့်ရမှာကိုစိတ်မရှည်တဲ့သူဆိုတော့ လူတွေအများကြီးတန်းစီနေတဲ့နေရာကိုရှောင်ဖြစ်တယ် တချို့ပုံမှန်ဈေးနဲ့အနားမကပ်နိုင်ဘဲဈေးလျှော့တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဝယ်ရတဲ့ နေရာလောက်ဘဲ စိတ်ကိုမနဲဆွဲဆန့်ပြီး တန်းစီဖြစ်တယ်
mgmgthan July 16, 2013 at 7:58 PM
ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာကတော့ တန်းစီတာနဲ့ အကျွမ်းတဝင် မဖြစ်သေးဘူး။ ကားတွေတန်းစီတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးခန်းမှာ တန်းစီရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တနည်းနည်းနဲ့ ရှေ့ကို ကျော်သွားအောင် ဉာဏ်နီဉာဏ်နက် မျိုးစုံသုံးပြီး လုပ်ကြတုန်းပဲလေ။ တကယ်ဆိုရင် စနစ်တကျ တန်းစီတာ ကောင်းပါတယ်။
sosegado July 16, 2013 at 8:31 PM
ဂျပန် လေဆိပ် အင်မင်ဂရေရှင်းမှာ တန်းစီတာ နာရီဝက် တစ်နာရီကြာလေ့ရှိပါသည်
isn't standing in the queue better than pushing. We need to learn to makealine and wait in our country. we are so used to pushing in the crowd and it's so ugly.
When I went to Thailand first time my senior told me to line up if I see something lining up. He said they were giving some sample. So we went out one day and saw some line up. We run into line and hope to get something. At the end only I knew that it was for paper work to do for Thai people (like မှတ်ပုံတင်). Ha ha so funny..It was 20 years ago.
တန်ခူး July 17, 2013 at 1:02 PM
သက်ဝေရေ... တချို့ က ဘ၀အတွက် တန်းစီကြပါတယ်.. အဲဒီအကြောင်းပို့ စ်ရေးဖို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေတောင် စုဆောင်းထားပါသေးတယ်... သက်ဝေဒီပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး အဲဒါလေးရေးဖြစ်တော့မယ်.. ရေးပြီးရင် လက်တို့ လိုက်မယ်နော်... တန်းစီတဲ့သူတွေတွေ့ တိုင်း Mr Bean လူလည်ကျတာသွားသတိရပြီးပြုံးမိပါတယ်... အကြာဆုံးတန်းစီဖူးတာတော့ အိုဂျီနှစ်ပတ်လည်member sale တုန်းကပါ... ဟီး... အဲဒီတုန်းက ဘယ်လောက်ကြာသလဲဆို ဒင်နာစားရင်းနဲ့ တောင် စီရတာပါ... fast food dinner ပေါ့...အိမ်ကလူက ဘယ်တော့စိတ်မရှည်ပေါက်ကွဲမလဲလို့သူ့ မျက်နှာကြည့်ရတာလဲ အမော... သူ့ ခမျာ ကိုယ့်စောင့်ပေးရတယ်ဆို အလျော်အစားနဲ့အကျီတွေဘောင်းဘီတွေ အများကြီးဝယ်ပေးလိုက်ရတယ်... အဲဒီတုန်းက အ်ိမ်ကအဝေးကြီးလာတာ တန်အောင်စီတာ... တကယ်ကျတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ အတော်ကို စိတ်မရှည်ဘူး... on line shopping လုပ်လို့ ရလာတော့ အတော်သက်သာသွားတယ်နော်
တစ်ခါက Expo မှာ ရည်ရွယ်ချက်မရှိရောက်သွားရင်း ပစ္စည်းလေးတွေ ဈေးသက်သာလို့ ကောက်ထည့်.. cashier နားရောက်မှ ငွေရှင်းဖို့ တန်းစီနေတဲ့ လူတန်းကြီးက ဟော ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက်ထိ ထိ ဇစ်ဇက်ပုံ ရှည်လျားလွန်းလို့ မဝယ်ဖြစ်ပဲ ပြန်လာရတာ မှတ်မိတယ်
ကုိုယ်ကတော့တစ်ခုခုသက်သာအောင်ရဘို့အတွက်တန်းစီရမယ်ဆုိုရင်အဲဒါကိုမ၀ယ်တော့ဘူး။
Adora etc. July 18, 2013 at 4:54 PM
မမသက်ဝေပြောမှ "ငါဘယ်တုန်းက နောက်ဆုံး ၁၅မိနစ်ကျော် ကြာအောင် တန်းစီခဲ့ပါလိမ့်" လို့စဉ်းစားမိတယ်။ မှတ်မိတာကတော့ အင်ဒိုနီးရှား ဂျာကာတာကိုအလည်သွားတုံးက လူဝင်မှုကြီးကြတ်ရေး မှာပါ။ တန်းစီနေတဲ့သူ မများပါဘဲနှင့် ဘာလို့ကြာမှန်းမသိ စောင့်ရတာ တော်တော်ကြာပါတယ်။ ပစည်းတခုခု အလကား ရဖို့အတွက်တော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မစောင့်ဖူးပါဘူး။ အစားမက်တဲ့သူဆိုတော့ စားချင်တဲ့မုန့်တွေရှိတဲ့ ဆိုင်မျိုးမှာတော့ ဗိုက်သိပ်မဆာရင် တန်းစီပြီး ထိုင်စောင့်ဘူးပါတယ်။
မမပြောသလို ဘာမှန်းမသိပဲ တန်းစီနေတဲ့ အန်တီကြီးတွေတော့ ခဏခဏတွေ့ဖူးတယ်။ စလုံးရောက်ခါစကဆို အံ့ဩလို့။ ခုတော့ ရိုးနေပြီ။
တန်းစီတာ စည်းကမ်းရှိတဲ.၊ယဉ်ကျေးမှုပြတဲ. လုပ်ရပ်တခုလို.မြင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလို တခုခုဆိုတာနဲ. အကုန်စုပြုံတိုးနေကြတဲ.မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ရတာ ၊ကိုယ်.နိုင်ငံသားတွေ စည်းကမ်းရှိဖို.တော်တော်.ကိုလိုသေးတယ်လို.ဘဲ မချင်.မရဲဖြစ်မိပါတယ်။
အခုအများဆုံးတွေ.နေတာကတော. Myanmar Celebrities's Gossip ထဲမှာ ခဏခဏတွေ.နေရတာက အဆိုတော်တွေရဲ.ဗီစီဒီတို.ဘာတို.ပရိုမိုးရှင်းပွဲတွေကို ရှော.ပင်မောလ်တွေမှာလုပ်ရင်၊ အဆိုတော်တွေကလဲ လက်မှတ်ထိုးပေးဖို. စားပွဲရှည်တွေနဲ.ထိုင်နေကြတယ်။အဲဒီမှာ အဆိုတော်တွေရဲ.လက်မှတ်ကိုလိုချင်လို. တိုးနေကြတာတွေက မြင်မကောင်းဘူး။ ဘယ်.နှယ်. အဲဒီအဆိုတော်ရဲ.လက်မှတ်က (ကိုယ်.တယောက်ထဲရဲ.အမြင်နဲ.ဆိုရင်တော.) ဘယ်နားမှာမှ သုံးစားလို.မရတဲ.ဟာကို ဘာလို.များ အဲ.လောက်တောင်တိုးဝှေ.နေကြပါလိမ်.လို.။ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ မို.လို.ကိုယ်ကြိုက်တဲ.နှစ်သက်တဲ.အဆိုတော်ရဲ.လက်မှတ်ကိုလိုချင်လို.ဆိုရအောင်လဲ တခြားအရွယ်အမျိုးသမီး အမျိုးသားကြီးတွေလဲတွေ.ရတယ်။ ထားပါ၊ လိုချင်တာသူ.အပိုင်း၊ အခုဟာက တန်းစီပြီး အိဒြေရရ မစောင်.ကြတာ ကြည်.ရတာတော်တော်ဆိုးတာပေါ.။ အဲဒီလိုမြင်ကွင်းတွေနဲ.စာရင် စလုံးမှာလို၊ ဂျပန်မှာလို လူတိုင်း ကိုယ်လိုချင်တာကိုရဖို. စိတ်ရှည်လက်ရှည် တန်းစီပြီး ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တန်းစီပြီးစောင်.နေကြတာကိုမြင်ရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
(ဒါပေမယ်. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ မသက်ဝေလိုဘဲ တန်းစီမှရလာမယ်. မဖြစ်ညစ်ကျယ်ပစည်းလေးတွေအတွက် ဘယ်တော.မှ စိတ်မရှည်ခဲ.ပါ )
ဂျပန်မှာ 2011 မတ်လ 11 ရက်မှာ ငလျင်အကြီးကြီးလှုပ်တော. ရထားလိုင်းတွေ၊ elevator တွေပိတ်ကုန်တယ်။ elevator တွေက ငလျင်လှုပ်တော. သူ.အလိုလိုပိတ်သွားတော. ၊အထပ်အမြင်.ကြီးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ.သူတွေက ရိုးရိုးလှေခါးတွေကနေ မြေညီထပ်ကိုဆင်းကြရတယ်။တန်းစီပြီးစနစ်တကျဆင်းကြတယ်။အထပ်40ကျော်ကနေ မြေညီထပ်ကိုရောက်ဖို. အတွက် ရိုးရိုးemergency stairs ကနေဆင်းတာ တနာရီကျော်ကြာတယ်။
အဲဒီအချိ်န်မှာ လူတိုင်းကကြောက်ပြီးတုန်လှုပ်နေပေမယ်.လို.တိုးဝှေ.ဆင်းမနေကြဘူး၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ.တန်းစီပြီးစနစ်တကျဆင်းကြတယ်။
နေ.လည် ၂နာရီ၄၀လောက်က ငလျင်လှုပ်လို. ရထားလိုင်းတွေပိတ်သွားတာ ည၁၁နာရီ၄၀လောက်မှာရထားလိုင်းတွေပြန်ဖွင်.တော.၊ လူတွေက ရထားစီးဖို.လဲ တန်းစီပြီးဘဲ စနစ်တကျသွားကြတယ်။အဲဒါကတော. ဂျပန်ရဲ. မဖြစ်မနေ တန်းစီကြရတဲ. စနစ်ပါဘဲ။
Jasmine Jasmine July 19, 2013 at 10:18 AM
ဟုတ်ပ, တနင်္ဂနွေနေ့က IMM shuttle bus ကို တန်းစီရတာ ၄၅ မိနစ်လောက်ကြာတယ်, အပြန်ကျတော့ ဘတ်စကားနဲ့ဘဲ ပြန်လာတော့တယ်..
Win Pa Pa Ko July 19, 2013 at 10:18 AM
မြန်မာပြည်ကသူတွေကျတော့ တန်းစီခြင်းနဲ့ နေသားမကျသူများ ဖြစ်နေတယ် ... နေရာတကာ ကျော်တက်ဖို့ ၀န်မလေးဘူး ... ရောသမရမယ် ...
ဟီးဟီး သာမီးလဲ ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်နဲ့ ဗိုက်နာတဲ့အချိန် တန်းစီရတာ ကြိုက်ဝူး
May Zin July 19, 2013 at 10:19 AM
မမရေ အရင်ကတော့ စလုံးတွေ တစ်ရှုးတထုတ်အတွက်အားနေတန်းစီတယ်ပဲထင်ခဲ့တယ်၊၊
ရန်ကုန်ပြန်တော့ passport လုပ်တာ တန်းမစီပဲ လုဝင်တယ်၊ ကိုယ်ကတန်းစီနေလည်းအလကားပဲ ၊ ဘယ်သူ့ မှလိုက်မစီပဲလုဝင်တယ်။ စိတ်မရှည်လို့တန်းစီပါလို့ပြောတော့စိတ်
ဆိုးကြတယ်၊၊ အဲ့ဒီတော့မှ စလုံးက အကျင့်ကောင်းလေးတွေကို ပြန်သတိရမိတယ်။ အကြာဆုံးတန်းစီဖူးတာ 5နာရီကျော်
( အိုင်ဖုန်းစပေါ်တုန်းက singtel building ကိုသက်စေ့ပတ်တာ
စင်ကာပူရဲ့ ချစ်စရာလည်းကောင်း တခါခါ အမြင်ကတ်စရာလည်းကေင်း( ကျားစူးတချို့  ) တဲ့ စနစ်တခုပါ။။ .
တစ်ဒေါ်လာ burger king ကို လွန်ခဲ့တဲ့ 4နှစ်လောက် တန်းစီပီး ဖတ်ဖတ်မောထဲက လိုအပ်မှ/ မလုပ်လို့ မရ / မစီလို့ မရ မှပဲတန်းစီတော့တယ် .daily life ကတော့ Mrt Q တာနဲ့စရတာပါပဲ .. hee
Aung Aung July 19, 2013 at 10:19 AM
ရန်ကုန်ပြန်ပြီး ဖုန်းဘီလ်ရုံး... လျှပ်စစ်မီတာခွန်ရုံးတို့မှာ လာတန်းစီကြည့်ပါလား.... ပျော်စရာကောင်းတယ်....
Moe Moe Kyaing July 19, 2013 at 10:20 AM
ရုံးပြန်ဆင်းတဲ့အချိန် မှတ်တိုင်နားနီးမှ..ကားလမ်းကြပ်နေရင်..မြန်မာပြည်က ဘတ်စ်ကား ဒရိုင်ဘာတွေကို သတိရတယ်..မြန်မာပြည်မှာဆို..လှည်းတန်းမီးပွိုင့်မှာ ကားတန်းရှည်နေပြီဆို..ရောက်တဲ့နေရာမှာ..ဆင်းချင်တဲ့သူရှိရင်..ချပေးလိုက်တာဘဲ..ကောင်းထှာ..ဒီမှာတော့ မှတ်တိုင်က လမ်းဆင်းလျှောက်ရင် ၅ လှန်းလောက်ဆိုရောက်ပြီ..ဒါပေမဲ့..ကားဒရိုင်ဘာက တံခါးဘယ်တော့မှ ဖွင့်မပေးဘူး..( နေ့တိုင်း Joo Koon MRT ) နားရောက်ရင်..စိတ်တိုရတယ်..
Moe Aung San July 19, 2013 at 10:20 AM
လိုဘတစ်ခုစီကြောင့် တန်းတွေကတော့စီနေရဦးမှာပဲ ကြားဖြတ်တဲ့သူတွေကိုမုန်းတယ်.. ဖေဖေ..
သက်ဝေ July 21, 2013 at 12:26 AM
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... မှတ်ချက်တွေ တစုတစည်းထဲ ဖြစ်သွားအောင် ဖဘက မှတ်ချက်တွေကို စိတ်လက်ရှည်ရှည် ကူးပေးသွားတဲ့ အမည်မသိ စာဖတ်သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ကျွန်မရဲ့ အရေးအသား ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် စာရဲ့ ဆိုလိုရင်း မပေါ်တာ ကို တောင်းပန်ပါတယ်... ကျွန်မဆိုလိုချင်တာက တန်းစီခြင်းမှာ ပျော်မွေ့နေကြတဲ့ သူတွေအကြောင်းကို ရေးတာ... တန်းစီတာကို မကောင်းပြောသလို ဖြစ်သွားပါတယ်... အမှန်ကတော့ တန်းစီတာ ဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စ စည်းကမ်းတကျ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စမို့ ကြိုဆိုပါတယ်... ကျွန်မပြောချင်တဲ့ တန်းစီခြင်း အကြောင်းတွေကို နောက်တပိုစ့်မှာ ဆက်ရေးပြဖို့ ကြိုးစားပါအုံးမယ်...း-)
ponyate July 21, 2013 at 9:06 AM
တူတူပဲ။ တန်းစီရတာကို မဖြစ်မနေ လုပ်ရမှာကလွဲလို့ မကြိုက်ဘူး။
An Asian Tour Operator October 3, 2013 at 11:05 AM
တန်းစီ တာနဲ့ပါတ်သက်လာရင် တွဲပြီးပြောလေ့ရှိတာ သွား သတိရတယ်.. "စနစ်တကျ တန်းစီပါ" ဆိုတာလေ..။
Ronald October 3, 2013 at 11:27 AM
၁၅မိနစ်ထက်မနည်းအချိန်ပေးပြီးတန်းစီခဲ့ရတာက စလုံးရောက်မှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက စလုံးသံရုံးမှာ ဗီဇာလျှောက်တဲ့အချိန်ကတည်းကဆိုပါတော့။ နေသားမကျသေးတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုဟာ လူတိုင်းကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေတာအမှန်ပါ။ ပုံစံကျတာ၊ စနစ်ကျတာ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမြန်ဆန်တာ ဘယ်လိုပင် အားသာသော်လည်း နေသားမကျတဲ့စိတ်နဲ့ အလေ့အထတစ်ခုကို ချက်ချင်းလက်ခံဖို့ခက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့သဘာဝပါ။ ဘယ်အလေ့အထမဆို အလေ့အကျင့်မရှိတုန်းသာ သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်တာပါ။ လေ့ကျင့်ပါများလာတော့ ဒီလိုလုပ်မှဖြစ်မယ် ဒီလိုလုပ်မှသင့်တော်တယ် ဒါမျိုးလုပ်သင့်တယ်ဆိုပြီး ချိန်ထိုးစဉ်းစားမနေဘဲ သူလိုငါလို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေရင်း လိုက်လုပ်ရင်း သမရိုးကျအလေ့အထတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်။ စည်းကမ်းတစ်ခုကို လိုက်နာတတ်ဖို့ အရင်သင်ပေးရတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီလိုတန်းစီပါ။ ဒီလိုနေပါ။ ဒီလိုထိုင်ပါစသဖြင့်ပေါ့။ တန်ဖိုးထားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးရတယ်။ လိုက်နာတတ်အောင် ဆုပေး၊ ဒဏ်ပေးစနစ်တွေကျင့်သုံးရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အရေးမပါတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာ အကြောင်းမဲ့အချိန်အလဟဿဖြစ်မယ့် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းခြင်းမျိုးကို မနှစ်သက်ပေးမယ့် စည်းကမ်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့ ကြိုက်နှစ်သက်ပါကြောင်း Pho Sweet ရဲ့ Concerns on queuing ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ... :)
သိ င်္ဂါရ October 3, 2013 at 5:29 PM
ရွှေပြည်မှာတော့ ... " တာဝန်ရှိသူမှ အပ မ၀င်ရ " တို့ ၊ " ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများသာ " တို့ ဆိုင်းဘုတ် ကပ်စွဲထားတဲ့ အခန်းတွေထဲ ၀င်ဖို့ တန်းစီနေရတွေ က.ည.န တို့ ဘာတို့ မှာ အများဆုံး တွေ့ဖူးသလိုပဲ ... :)